ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို တင်ပို့တဲ့ မြန်မာ့ပို့ကုန်တွေအတွက် အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ပေးမယ့် အီးယူ GSP အခွင့်အရေး
ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ ကို မြန်မာနိုင်ငံက တင်ပို့မယ့်ကုန်ပစ္စည်း တွေအပေါ်အကောက်ခွန် သက်သာခွင့် ပြန်လည်ပေးအပ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဥရောပပါလီမန်နဲ့ ဥရောပကောင်စီ တို့က ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ မှာ Regulation (EU) No. 607/2013 နဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ကစပြီး ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တွေကိုတင်ပို့တဲ့ မြန်မာ့ပို့ကုန်တွေအပေါ် ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးတဲ့ နိုင်ငံစာရင်းဝင်နိုင်ငံ တစ် နိုင်ငံအနေနဲ့ အကောက်ခွန်ကင်းလွတ် ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်နောက် ကြောင်းပြန်ရရှိမယ့် အခွင့်အရေးအနေနဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ကစပြီး ပို့ခဲ့တဲ့ ပို့ကုန်တွေကစပြီး ဒီအခွင့် အရေး ကို ပြန်လည် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အီးယူဈေးကွက်ကို လက်တွေ့ တင်ပို့ရာမှာ အီးယူ GSP နဲ့ပတ်သက် ၍ သိသင့်သိထိုက်တာ တွေကို အမေး အဖြေပုံစံနှင့် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်-၁။ အီးယူ GSP ဆိုတာ ဘာလဲ။ အီးယူ GSP ဆိုတာဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေကို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသေးတဲ့ နိုင်ငံ တွေက တင်ပို့တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေ အပေါ်တစ်ဖက်သတ်အကောက်ခွန် လျော့ပေါ့ပေးတဲ့အစီအစဉ် ဖြစ်ပါ တယ်။ ၂။ အီးယူက GSP အစီအစဉ်ကို ဘယ်လို နိုင်ငံတွေကို ပေးအပ် တာပါလဲ။ အီးယူက GSP အခွင့်အရေးကို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၊ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါး တဲ့နိုင်ငံများနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုနှင့် ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံများဆိုပြီး အုပ်စုသုံးခုခွဲ ပြီးပေး ပါတယ်။ အုပ်စုအပေါ်မူတည်ပြီး အကောက်ခွန်ကို လုံးဝကင်းလွတ် ခွင့် (သို့) လျော့ပေါ့ပေးတာ မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ထွက်ကုန်အားလုံး ကတော့အကောက်ခွန်ကင်းလွတ် ခွင့်ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လည်းပါဝင်ပါတယ်။၃။ ဒါဆို GSP အခွင့်အရေးရရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကတင်ပို့တဲ့ကုန်ပစ္စည်း အားလုံးဟာအခွန်သက်သာခွင့် ရမှာလား။ မရပါဘူး။ဒါကိုနောက်ပိုင်း ဆက် လက်ရှင်းပြပါ့မယ်။၄။ GSP အခွင့်အရေးရရှိဖို့ ဘယ်လိုအချက် အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီဖို့ လိုအပ်ပါလဲ။ ပင်းရင်းဒေသစည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီဖို့ လိုအပ် ချက် (၃) ခုရှိပါတယ်။ နံပါတ်တစ်ကတော့ (Origin Criteria) ပင်ရင်းဒေသထုတ်ကုန် စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီရမယ်။ နံပါတ်နှစ် ကတော့(Direct Consignment) တိုက် ရိုက်တင်ပို့တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ရမယ်။ အခုအချိန် မှာ အီးယူက Direct Consignment ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Non Manipulation စည်းမျဉ်း ကို သုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီး ဖြေလျော့မှု ပေးထား ပါတယ်။ Non Manipulation ဆိုတာက GSP အခွင့်အရေး ရရှိတဲ့နိုင်ငံက တင်ပို့လိုက် တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထပ်တိုးထုတ် လုပ်ခြင်းမရှိပဲ မူရင်းအခြေအနေ အတိုင်း အီးယူအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအတွင်း သယ်ဆောင် ခွင့် ပြုတဲ့နည်းလမ်းဖြစ် ပါတယ်။ နံပါတ်သုံး ကတော့ (Documentary Evi-dence) သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းအထောက် အထား (Form A, Invoice) အပြည့်အစုံ တင်ပြနိုင်ရမယ်။ ၅။ နိုင်ငံတခုရဲ့ ပြည်တွင်းထွက်ကုန်ဆိုတာကို ဘာနဲ့ တိုင်းတာတာလဲ။ နိုင်ငံတခုရဲ့ထွက်ကုန်ဆိုတာကို ပင်ရင်းဒေသ စည်းမျဉ်းနဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ ၆။ ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းဆိုတာရော ဘာ လဲ။ ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းဆိုတာ ပစ္စည်းတွေ ဘယ်ကနေထုတ်လုပ်လဲဆိုတာကို စဉ်းစားတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်နိုင်ငံ ကနေတင်ပို့တယ်ဆိုတာအပြင်ဘယ်လိုထုတ် လုပ်တယ်ဆိုတာလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ၇။ ပင်ရင်းဒေသထွက်ကုန်ကို ဘယ်လို သတ် မှတ်လဲ။ ရာနှုန်းပြည့် ပြည်တွင်းထွက်ကုန် (Wholly Obtained or Produced)၊ပြည်ပသွင်း ကုန် ကုန်ကြမ်းအသုံးပြု ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ထွက် ကုန် (Not wholly obtained or produce) ဆိုပြီးနည်းလမ်းနှစ်မျိုးနဲ့သတ်မှတ် ပါတယ်။ ၈။ ဘယ်လို ပစ္စည်းမျိုးကို ရာနှုန်းပြည့် ပြည်တွင်း ထွက်ကုန်လို့ သတ်မှတ်လဲ။ အခြေခံအားဖြင့်တော့ အခွင့်အရေးလက်ခံ ရရှိတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ သဘာဝသယံဇာတ ကိုအသုံး ပြုပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်ပါ တယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်ပသွင်းကုန်ပစ္စည်း မပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ လက်ရှိ မြန်မာ့ပို့ကုန်တွေထဲက ဆန်၊ ပဲမျိုးစုံ တို့ဖြစ်ပါတယ်။၉။ ပြည်ပက တင်သွင်းတဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကို အသုံးပြု ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ အတွက်ဘယ်လို အချက်တွေက ပြည်တွင်း ထွက် ကုန်လို့ သတ်မှတ်နိုင်မှာလဲ။ အချို့ပစ္စည်း တွေဟာ အလွယ်တကူပဲ နိုင်ငံ တစ်ခုရဲ့ ထွက်ကုန်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပေမဲ့ တိုး တက်လာနေတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပစ္စည်း အချို့ ဟာတစ်နိုင်ငံတည်းက ထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်း တွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခွင့်အရေး လက်ခံရရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေဟာ ပြည်ပက ပစ္စည်း တွေ တင်သွင်းပြီး ထုတ်လုပ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ ထွက်ကုန်ဖြစ်ဖို့ အတွက် ထုတ်လုပ်မှုပုံစံတွေကို ကြည့်ပြီး သတ်မှတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် ဒီနည်းလမ်း(၃)မျိုးနဲ့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် - (၁) အကောက်ခွန်လိုင်း (H.S ခေါင်းစဉ်) ပြောင်းလဲမှု နည်းလမ်း (၂) ပြည်တွင်းပစ္စည်း တန်ဖိုး ပါဝင်မှု ရာခိုင်နှုန်း ထွက်ချက်သည့်နည်းလမ်း (၃) သီးသန့်စည်းမျဉ်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှု နည်း လမ်း အကောက်ခွန်လိုင်း (H.S ခေါင်းစဉ်) ပြောင်း လဲမှုနည်းလမ်းဆိုတာ အသုံးပြုထားတဲ့ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းရဲ့ H.S ခသိန နဲ့ထွက်လာတဲ့ ကုန်ချောပစ္စည်းရဲ့ H.S code ဟာ ဂဏန်း ၄ လုံး (4 digit) ကနေစပြီးကွဲပြားရင်ရ ပါတယ်။(ဥပမာ - သတ္တုချောင်း (H.S code 74.07) ကနေ သတ္တုပိုက် (H.S code 74.11) ကိုပြောင်းလဲသွားခြင်းမျိုး) သစ် (H.S code 4407) ကနေ ကုလားထိုင် (H.S code 8403) ကို ပြောင်းလဲသွားတာ မျိုး။) ပြည်တွင်းပစ္စည်း တန်ဖိုး ပါဝင်မှု ရာခိုင်နှုန်း တွက်ချက်သည့်နည်းလမ်းဆိုတာ ပြည်ပ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း အသုံးပြုတဲ့ အချိုးအစားနဲ့ စက်ရုံထွက် ကုန်ချော ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို အချိုးအစားတွက်ချက်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိုးအစားနဲ့မကိုက်ညီရင်တော့ပင်ရင်းဒေသ ထွက်ကုန်လို့ သတ်မှတ်လို့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ (ဥပမာ - ထီး (H.S ခေါင်းစဉ်-6601) ကို ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အသုံးပြုထားတဲ့ ပြည်ပ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း တန်ဖိုးဟာ ကုန်ချောပစ္စည်း တန်ဖိုးရဲ့ ၇၀%ထက်မပိုရတာမျိုး၊ သတ်မှတ် အချိုးအစားဟာ ကုန်ပစ္စည်းကိုလိုက်၍ ကွဲလွဲမှု ရှိပါတယ်။)သီးသန့်စည်းမျဉ်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်းစဉ် (သို့မဟုတ်) နည်းပညာ အသုံးပြုထုတ်လုပ်တဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀။ ကိုယ့်ပစ္စည်းဟာ ပင်ရင်းဒေသ စည်းမျဉ်း နဲ့ကိုက်ညီပြီဆိုရင် ဘာကိုသတိထားဖို့ လိုအပ် သေးလဲ။ ကိုယ့်ပစ္စည်းရဲ့H.S code အမှန်ကိုသိရှိဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် Origin Criteria မှားယွင်းပြီးလျှောက်မိတတ်ပါတယ်။ Origin Criteria မှားယွင်းပြီး လျှောက်ထား မိရင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။၁၁။ Form A ဆိုတာက ဘာပါလဲ။ Form A ဆိုတာအီးယူကိုပစ္စည်းတင်ပို့တဲ့ အခါ မှာ အကောက်ခွန် သက်သာခွင့် ရရှိဖို့ အသုံးပြုတဲ့ စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂။ Form A ကို ဘယ်သူဖြည့်သွင်းရသလဲ။ Exporter ကဖြည့်ရပါတယ်။ Exporter ကိုယ်တိုင်ကသာ ကိုယ့်ပစ္စည်းဟာ ပင်ရင်း ဒေသ စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီ/မညီသိနိုင်လို့ပါ။၁၃။ Form A လျှောက်ထားလာမှုကို ထုတ် ပေးတဲ့ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း က ငြင်းဆိုခွင့် ရှိလား။ ရှိပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ပင်ရင်းဒေသ သတ်မှတ်ချက်ကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုး၊ လုံလောက်တဲ့ တင်ပြနိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ငြင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။၁၄။ Form A ကို ဘယ်အချိန်မှာ လျှောက်ထား နိုင်ပါသလဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့် Form A ကို ကုန်ပစ္စည်း အမှန် တကယ် တင်ပို့ပြီးချိန်မှာ လျှောက်ထားနိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့အခြေအနေတွေမှာ နောက်ကြောင်းပြန် လျှောက်ထား နိုင်ပါ တယ်။ ၁၅။ Form A ကို တစ်စောင်မှာ ကာလသတ် မှတ်ချက် ရှိပါသလား။ ရှိပါတယ်။ Form A ကိုထုတ်ယူပြီး ၁၀ လအတွင်းတင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံရဲ့ အကောက်ခွန် ဌာနကို တင်ပြရပါမယ်။ ၁၆။ Form A ပျက်စီး၊ ပျောက်ဆုံး၊ ခိုးယူခံရရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ မိတ္တူမှန် ပြန်လည်လျှောက် ထားနိုင်ပါတယ်။ ၁၇။ မြန်မာနိုင်ငံကို အီးယူက GSP အခွင့် အရေးပြန်လည်ပေးအပ်မယ်လို့ သိရှိထား ပါတယ်။အချိန်အတိအကျ ပြောနိုင်ပါ ပြီးလား။ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ မြန်မာ နိုင်ငံက အီးယူကပေးတဲ့ GSP အခွင့် အရေးကို တစ်ကျော့ပြန် ပြန်လည် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။၁၈။ မြန်မာ့ပို့ကုန်တွေအတွက် နောက်ကြောင်း ပြန်လျှောက်ထားနိုင်မဲ့ အစီအစဉ်ကိုလဲ သိလိုပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့ ကစပြီး အီးယူကိုတင်ပို့ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို နောက်ကြောင်းပြန် အနေနဲ့ Form A ပြန်လည် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။သုတေသနနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဌာနခွဲ
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပထဝီဝင် အပြောင်းအရွေ့
ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ ဘရွတ်ကင်းအင်စတီကျူးရှင်း ပညာရှင်အဖွဲ့မှ လောရင့်ချန်ဒီနှင့်အဖွဲ့သည် ဖွံ့ဖြိုး ဆဲနိုင်ငံများ၏ စားသုံးမှုဖြန့်ခွဲပုံ (Distribution of consumption) ကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။(တစ်နေ့အတွက်ရရှိသော တစ်ဒေါ်လာ သို့မဟုတ် နှစ်ဒေါ်လာစသည့်ဝင်ငွေကိုလူဦးရေမည်မျှ ခွဲေ၀ စားသုံးကြရသလဲဆိုသည်ကို သုတေသန လုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။) စားသုံးမှုဖြန့်ခွဲပုံသည် အချိန်နှင့် အမျှပြောင်းလဲခဲ့ပြီး၊ နောင်တွင်မည်သို့ ပြောင်းလဲ သွားနိုင် သည်ကိုပုံပြဇယား(Chart)ဖြင့် ဖော်ထုတ် ပြသခဲ့သည်။နိုင်ငံများချမ်းသာကြွယ်ဝလာသည် နှင့်အမျှ အိမ်ထောင်စုစားသုံးမှုလည်းတိုးတက်လာ သည်။ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမြန်ဆန်လာ သဖြင့်၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း တွင် နှစ်စဉ်စားသုံးမှုသည်လည်း သိသိသာသာမြင့်တက်လာကြောင်းထောက်ပြသည်။ စားသုံးမှုအဆင့် အမြင့်ဆုံး သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် ၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၀ပြည့်နှစ်ကာလအတွင်း ဆင်းရဲ တွင်းမှအစုအပြုံလိုက်လွတ်မြောက်သူ ဦးရေများပြား ခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ကြသည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က လျိုကျီကျွင်း ဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မီးရထားဝန်ကြီးဖြစ်လာပြီး တရုတ်နိုင်ငံ မှာ မြန်နှုန်းမြင့် ကျည်ဆန်ရထား ကွန်ရက်ကြီး ထူထောင်ကာ ခုန်ပျံကျော်လွှား တိုးတက်ဖို့ ကြံဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီစီမံကိန်း ကြီးကြောင့်သူရဲ့ဝင်ငွေဟာလဲခုန်ပျံ ကျော်လွှားပြီး တိုးပွားခဲ့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ဖေဖော် ဝါရီလမှတော့ သူ့ကိုလာဘ်စားမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးပြီး တရားစွဲ ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူရယူခဲ့တဲ့ လာဘ်ငွေပေါင်း ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၂၀ ခန့်ရှိခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ကို ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ၅ လကြာတဲ့အခါ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဝိန်ကျိုး မြို့အနီးမှာ ကျည်ဆန်ရထားတစ်စီး အရှိန်လွန် တိမ်းမှောက်မှု ကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။ ခရီးသည် ၄၀ သေဆုံးခဲ့ရပြီး ၁၉၀ကျော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ ခဲ့တဲ့အခါ လျိုကျီကျွင်းအပေါ် အပြစ်တွေပိုပြီး ပုံကျ လာခဲ့ရပါတယ်။
လျိုကျီကျွင်းရဲ့ခြစားမှုကြီးဟာ မော်စီတုန်း ခေတ်လွန်တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲတဲ့ မသမာမှု ကြီးတွေထဲက ဥပမာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် နိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်ကြီးရဲ့ အစီရင်ခံစာတစ်စောင် မှာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ကနေ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အထိအကျင့် ပျက်ခြစား မှုတွေကြောင့် အစိုးရအရာရှိပေါင်း ၁၆၀၀၀ ကို အရေးယူခဲ့ရပြီး သူတို့ရဲ့ ခြစား မှု တွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာအကြမ်းအားဖြင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၂၅ ဘီလီယံခန့်ရှိတယ် လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ေ လာလောဆယ်တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုး သား စာရင်းစစ်ရုံး (NAO) ရဲ့ အစီရင်ခံစာ အရ အစိုးရကအိမ်ရာေ ထာက်ပံ့ကြေးတွေထုတ် ပေးရာ မှာ တရုတ်အရာရှိတွေရဲ့ လာဘ်စားမှု ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၇၁ သန်းနီး ပါးရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကလဲ အဲဒီစာ ရင်းစစ်ရုံးရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ ၂၀၀၅ ခုနှစ် တစ်နှစ် တည်းမှာပဲ အစိုးရရဲ့ ဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅ ဘီလီယံ လောက်ဟာအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ မသမာ ခြစား မှုတွေကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ကာနေဂျီ နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့ လေ့လာချက်တစ်ခု အရအကျင့် ပျက်ခြစားမှုတွေကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ GDP ရဲ့ ၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိတဲ့ငွေကြေး တန်ဖိုးဟာ ဆုံးရှုံး နစ်နာနေခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီနှုန်း အရဆိုရင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်က အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တွေ ကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၆ ဘီလီယံ ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာဆိုရင် ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀၀ ခန့် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပေကျင်းမြို့ရှိ တရုတ်နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေး ပညာတက္ကသိုလ်မှ လူထုမူဝါဒ ဆိုင်ရာဘာသာ ရပ်ပါမောက္ခကျူးလီဂျာ က "မသမာတဲ့နည်းလမ်း တွေနဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေဟာ ယနေ့ဗျူရို ကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားမှာ အမြစ်တွယ်နေပြီး အကြီးတန်းအရာရှိကြီးတွေ အတွက် အခွင့်အရေး တစ်ရပ်လိုဖြစ်နေပါ တယ်။ ရှေးခေတ်က တရုတ် နိုင်ငံမှာ ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့ပေမဲ့ ယခု အခါ ထောင်ပေါင်းများစွာရှိပြီးနေရာတကာ မှာလဲ တွေ့နေရတယ်လို့" ထောက်ပြထားပါတယ်။ (၁၈) ကြိမ်မြောက် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ကွန်ဂရက်မကျင်းပမီလအနည်းငယ်တွင်းထိပ်တန်း တရုတ်ပါတီခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးရဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကြီး တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပထမ တစ်မှုကတော့ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ပိုရှီလိုင် (Boxilai) နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ပိုကုခိုင်လိုင်တို့ရဲ့ မသမာမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ပိုရှီလိုင်တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့တဲ့ ချုံချိန်မြို့တော်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ခေတ်မီတိုးတက်တဲ့ မြို့တော်တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ပိုရှီလိုင်ရဲ့ တရားဝင်ရရှိတဲ့ လခဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ သာရှိပေမဲ့ သူရဲ့သားနဲ့ဇနီးတို့ ဟာ ပေကျင်းမြို့တော်ကြီးမှာ ဇိမ်ခံကားတွေကို ထည်လဲစီးပြီးသွားလာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ပိုရှီလိုင်ရဲ့ ဇနီးကုခိုင်လိုင်ဟာအလွဲသုံး စားမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အပြင် ဗြိတိသျှလူမျိုး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးကို ဝိုင်အရက်တွင်းအဆိပ်ခတ်သတ်ဖြတ် မှုအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ချုံချိန် မြို့တော်ရဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီး အကဲဝမ်လီကျွင်းဟာ ပိုရှီလိုင်နဲ့ဇနီးကုခိုင်လိုင်တို့ရဲ့ ရန်ကကြောက်ရွံ့ လာပြီး ချန်ဒူမြို့ရှိ အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံး ကို ခိုလှုံခဲ့ရာကနေ အဲဒီမသမာမှုကြီး တွေဟာဖုံးဖိလို့ မရတော့ဘဲပေါ်ပေါက် လာခဲ့ရပါတယ်။ ပိုရှီလိုင် ရဲ့ တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုတွေ၊ အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင် မှုတွေ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကို လူအများသိရှိ လာခဲ့ကြပါတယ်။ မကြာသေးမီကပဲ ပိုရှီလိုင်ရဲ့ဇနီး ကိုလူသတ်မှုနဲ့ပြည်သူ့တရားရုံး ကစစ်ဆေးပြီး ပြစ်မှု ထင်ရှားတဲ့အတွက် သေဒဏ် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပိုရှီလိုင် ကိုလဲလာဘ်ငွေ အမြောက်အမြား ယူခဲ့မှု စွပ်စွဲချက်နဲ့ပါတီက ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ ထုတ် New York Times သတင်းစာကြီး မှာ ယခင်တရုတ်ဝန်ကြီး ချုပ်ဟောင်းဝမ်ကြားပေါင်ရဲ့ မိသားစု လျှို့ဝှက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဓနဥစ္စာအရပ် ရပ်တန်ဖိုးဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ အနည်းဆုံးရှိတယ်လို့ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါ တယ်။ ဝမ်မိသားစုဟာ စိန်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း နဲ့ အာမခံ လုပ်ငန်းတွေကရရှိလာတဲ့ ဝင်ငွေတွေနဲ့ ယခုလိုချမ်းသာကြွယ်ဝလာတယ်လို့ ထောက်ပြ ထားပါတယ်။ ဝမ်ကြားပေါင်ရဲ့ဇနီး ဇန်ပိုင်လီဟာ ဝမ်ကဲ့သို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီးစိန်ရောင်း ဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဝမ်နဲ့သားနှစ်ဦးဟာလဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တွေ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ရှိကြတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင် သစ်ရှီ ကျင်ပင်းက ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ကို ပထမဆုံး မိန့်ခွန်း ပြောကြားရာမှာ "မကြာမီနှစ်တွေအတွင်း ကတချို့နိုင်ငံတွေမှာ မျိုသိပ်ထားခဲ့ကြတဲ့ ပြဿနာ တွေ ပွင့်ထွက်လာရာမှ လူထုအုံကြွမှု တွေဖြစ်ပေါ် ကာ လူမှုရေးပဋိပက္ခတွေ ကတစ်ဆင့်အစိုးရတွေ ပြုတ်ကျခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုပြုတ်ကျရတဲ့ အဓိကအ ကြောင်းအရင်းဟာ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုနဲ့အဂတိ လိုက်စားမှုတွေ ထူပြောခဲ့ လို့ ဖြစ်ပါ တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာလဲ အဂတိလိုက် စားမှုဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးထွားလာရင် ပါတီနဲ့နိုင်ငံပါ ကျဆုံးဖို့ ဖြစ်လာနိုင်တာကို တွေ့ရှိရတဲ့အချက် အလက်တွေက ဖော်ပြနေပါတယ်။ သတိထား ပြီး စောင့်ကြည့်နေကြဖို့ လိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ကာလအနည်းငယ်အတွင်းမှာ စည်းကမ်းနဲ့ဥပဒေ ဖောက် ဖျက်မှုတွေ ဆိုးဆိုးရွားရွားရှိခဲ့ပြီး အန္တရာယ် ကြီးမားကာ နိုင်ငံရေးအရလဲ စည်းရုံးရေးပျက်ပြား စေခဲ့ ပြီး ပြည်သူလူထုကိုလဲ အထူးတုန်လှုပ်စေခဲ့ တယ်" လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပါခင်ဗျား။ ။Ref: Newsweek/ bjreview.com
လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်သွယ်ရေးက အစ အသိပညာတိုးပွားရေး ကနေကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အထိ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ ပါဝါ (စွမ်းအား) ဟာသိသာထင်ရှားစွာအလျင် အမြန်ဖွံ့ ဖြိုး ကြီးထွားလာနေတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။သမိုင်း မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေလောက်လူတွေနဲ့ အမြန်ဆုံး နီးစပ် ရင်းနှီးပြီးအ သုံးဝင်ခဲ့တဲ့ ကိရိယာ ပစ္စည်းမျိုး မရှိသလောက်ရှားပါးခဲ့ပါတယ်။ လက်နဲ့ကိုင်ပြီး အသုံးပြုရတဲ့ ဓားသို့မဟုတ် မီးခြစ်၊ ခဲတံဘောပင် သို့မဟုတ် စာရွက်တွေ လည်း လူနဲ့နီးစပ်လာခဲ့ပေမဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း လောက် သိပ်မြန်မြန်ကြီး နီးစပ်မှုမရှိခဲ့ တာကိုေ တွ့နိုင်ပါတယ်။ပိုက်ဆံ ငွေကြေးပဲအိမ်က ထွက်ရင်မပါမဖြစ်တဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ နည်းနည်း နီးစပ်ပါတယ်။ငွေရှိမှ ဂုဏ်တင့်တယ်တယ် ဆိုပေမဲ့ ညအိပ်ရင်မို ဘိုင်း ဖုန်း တွေလို ပိုက်ဆံ အိတ်တွေ ကို အိပ်ရာထဲမှာ မထားကြပါဘူး။ ခဏခဏ ကောက်ကိုင်ပြီး စစ်ဆေး ကြည့်ရှုတာလည်း မလုပ် ကြပါဘူး။ယခုအခါပိုက်ဆံအိတ်တွေအစား မိုဘိုင်း ဖုန်းတွေကတောင် တာဝန်ယူပေးလာနိုင်တာ တွေ့ ရပါတယ်။
လက်ဖျားလေးနဲ့နှိပ်ရုံ၊ တို့ရုံနဲ့ သိလိုတဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို သိရှိလာနိုင်ပါတယ်။မျက်မှောက်ခေတ် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ပါရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ စွမ်းရည်ဟာ လကမ္ဘာကိုဆင်းသက်တဲ့ အပိုလို ၁၁ အာကာသယာဉ်မှာ အသုံး ပြုတဲ့ ကွန်ပျူတာစွမ်းရည်ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။Time မဂ္ဂဇင်းကြီးနဲ့ Qualcomm နည်းပညာကုမ္ပဏီတို့ ပူး ပေါင်းပြီးမိုဘိုင်းဖုန်းစစ်တမ်းတစ်ခုကို ကောက်ယူ ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်တမ်းကို အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ တောင် အာဖရိက၊ အင်ဒိုနီးရှား နဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံ တွေမှာရှိတဲ့လူပေါင်း ၅၀၀၀ နီးပါးကိုမေးမြန်းပြီး ပြုစုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်တမ်းအရလူ လေးဦးမှာတစ်ဦးဟာ မိနစ် ၃၀ အတွင်း ဖုန်းတစ် ကြိမ်ခေါ်ယူ အသုံးပြုပြီး လူငါး ဦးမှာတစ်ဦးဟာ ၁၀ မိနစ်အတွင်းတစ် ကြိမ်အသုံးပြုနေကြပါတယ် ။မေးမြန်းတဲ့ လူဦးရေသုံးပုံတစ်ပုံက သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်း ဖုန်းတွေကို နည်းနည်းလေးကြာကြာ ကိုင်ခွင့် မရရင်စိတ်ထဲမှာ အလိုမကျဖြစ် နေကြတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ အမေရိကန် လူမျိုး အတော်များများက မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဆက်သွယ်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရှာဖွေ ဝယ်ယူခွင့်ရလို့၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ မြို့ရွာ ဒေသ တွေကို ရှာဖွေနိုင်လို့၊ မိမိထုတ် လုပ် ရောင်းချတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူ အသုံးပြုမယ့် သူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်လို့၊ မိမိတို့ရဲ့ကျန်းမာရေး အခြေ အနေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်လို့၊ မိမိတို့ရဲ့ ငွေရေး ကြေးရေးအခြေ အနေတွေကို သိရှိနိုင်ပြီး တခြား ဒေသမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မိသားစု ဝင်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို အမြဲမပြတ် ဆက် သွယ်နိုင်လို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြပါ တယ်။ ချမ်းသာတဲ့ သူတွေကလည်း သူတို့ဟာ တခြား သူတွေထက်အချိန် နာရီများစွာပို အလုပ် လုပ်ရပြီး စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ချိန်သိပ်မရပေမဲ့ မိုဘိုင်း ဖုန်းတွေ ကြောင့်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ပိုပြီး ထိထိ ရောက်ရောက်စီမံ ခန့်ခွဲနိုင်ကြောင်း၊ ရုံးမသွား နိုင်ရင်တောင်အဝေးကနေသတင်းအချက် အလက် တွေကိုဆက်သွယ်ရယူပြီး ကွပ်ကဲနိုင်ကြောင်းပြော ပါတယ်။အမေရိကန်လူမျိုး ဆယ်ဦး မှာ လေးဦးက မိုဘိုင်းဖုန်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ကောင်း မွန်အောင် အထောက်အကူပြုနေတယ် လို့ယူဆ ကြပါတယ်။ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ တရုတ်နဲ့ တောင်အာဖရိကလူမျိုးသုံးပုံတစ်ပုံကျော် ကတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို အကျိုးပြုနေတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ယခုအခါ ငွေပေးချေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ပါတယ်။ငွေစက္ကူတွေ၊ ပလတ်စတစ်ကတ်တွေထက် ပိုမို လျင်မြန်၊ပိုမိုလုံခြုံမှုလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာဂူဂဲလ် ငွေအိတ်(Google Wallet)အစီ အစဉ်အရ မိုဘိုင်း ဖုန်းထဲကို အထူးချစ်(ပ်)ပြား(Special chip )ထည့် က ခရက်ဒစ်ကတ်ဖတ်တဲ့ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ငွေပေး ချေနိုင်ပါတယ်။ စီလီကွန် တောင်ကြားက နည်း ပညာရှင်တွေ ကတော့ ငွေစက္ကူေ တွနဲ့ ငွေပေးချေ တဲ့ စနစ်ဟာ တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာနိုင်ပြီး အနာဂတ် မှာ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လို့ ဆို ထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်၊ သမ္မတအိုဘားမား ရွေး ကောက်ပွဲ ဝင်စဉ်တုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Facebook ဆိုရှယ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုသူ ပေါင်းဟာ သန်း ၄၀ ရှိခဲ့ပြီး သူရဲ့ မဲဆွယ်ရေးလုပ် ငန်းတွေကိုများစွာ အထောက်အကူပေး ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ယခုအခါ Facebook ကိုအသုံးပြုသူ ဦးရေဟာ သန်း ၁၆၀ အထိရှိလာ ပါတယ်။ အမေရိ ကန်လူမျိုးမဲဆန္ဒပေးနိုင်သူတိုင်း ဟာ မိုဘိုင်း ဖုန်းတစ်လုံး စီရှိကြတဲ့အပြင် အင်တာနက်ကို လည်း အသုံးပြုလာ ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် အင် တာနက် ကနေနိုင်ငံရေးမဲဆွယ်မှုတွေဟာ ပိုပြီး အရေးပါလာပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုး ၇၉ ရာခိုင် နှုန်းက မိုဘိုင်းဖုန်း ကနေနောက်ဆုံးသတင်းတွေကို သိရှိခွင့်ရတယ် လို့ပြောပါတယ်။ အိန္ဒိယလူမျိုး ၇၃ ရာခိုင်နှုန်း ကတော့ မိုဘိုင်း ဖုန်းတွေကြောင့် သူတို့ ရဲ့ရပ်ဝေး မှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့အမြဲ အဆက်အသွယ် ရရှိစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘရာဇီးလူမျိုး ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းကြောင့် သူတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အမြဲတမ်း ထိတွေ့ ဆက်ဆံနိုင် တယ်လို့ပြောပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားလူမျိုး ၄၈ ရာခိုင်နှုန်း ကတော့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန် အတော်များများ ဟာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ က ဖြေဖျော် ရေးအစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ရှုရင်း ကုန်ဆုံး နေတဲ့ အတွက် တခြားကမ္ဘာအရေး အခင်းသတင်း တွေ ကို မလေ့လာဖြစ် ဘူးလို့ဆိုကြကြောင်းပါ ခင်ဗျား။Ref:Time (Youre Life is Fully Moblie)
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးဘဏ်ဖြစ် သည့် နိုင်ငံပိုင်စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် (Agribank) ၏ အကြီးအကဲကို ဖမ်းဆီးအရေးယူလိုက်ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဗီယက်နမ်အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် လများ အတွင်းကလည်း ထိုဘဏ်မှပင် အကြီးတန်းအရာ ရှိလေးဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး၊ စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇ သန်းကို အလွဲသုံးစားပြု ခိုးဝှက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။ ယမန်နှစ် သြဂုတ်လက အခြားဘဏ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် အာရှကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (Asia Commercial Bank) ၏ အကြီးအကဲကို ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ရာ စတော့ဈေးကွက်နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက် စေခဲ့သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အသိစိတ်ဓာတ် မြင့်မားလာမှု
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း အန်းဟွေပြည်နယ်မှ လယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကျန်ရှီယူဟာ ဒေသခံ လယ်သမားတွေကို ဦး ဆောင်ကာ ရွာအနီးမှာရှိတဲ့ ဓာတုဗေဒစက်ရုံ တစ်ရုံရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကို ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ရွာရေကန်တွင်းက ငါးတွေ သေနေ တဲ့ပုံ တွေနဲ့ စက်ရုံကစွန့်ပစ်ရေဆိုးတွေ စီးဝင်မှုကြောင့် စိုက်ခင်းထဲက သီးနှံံပင်တွေ ညုှိးနွမ်း ပြီး သေကြေ နေတဲ့ပုံတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲပြီးတဲ့ေ နာက် ဒေသခံ မီဒီယာအဖွဲ့ အစည်း တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အန်ဂျီအိုအဖွဲ့ အစည်းတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဆက်လက်တောင်း ဆိုခဲ့တဲ့အတွက် ဓာတုဗေဒစက်ရုံနဲ့ ဒေသခံအစိုးရ တို့က ယွမ်ငွေ သန်း ၂၀၀ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၂ သန်း) မတည်ကာ ညစ်ညမ်းနေတဲ့ စက်ရုံပတ် ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်းအောင်နဲ့ စက်ရုံကြောင့် မြေ နေ ရာ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးရတဲ့ လယ်သမားတွေ အတွက် လျော်ကြေးငွေ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်က ငွေစက္ကူသစ်များ ထုတ်ဝေရန် ပညာရှင်များနှင့် တိုင်ပင်ခဲ့သည်။ လုံခြုံ ရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများ ထည့်သွင်းနိုင်ရန် ရူပ၊ ဓာတုနှင့် အင်ဂျင်နီယာ စသည့်ပညာရှင်များထံ အကူအညီ တောင်းခံသည်။ ကိုင်တွယ်သုံးစွဲ ခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်းတို့တွင် အဆင်ပြေစေရေး အတွက် လက်လီရောင်းစက် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ သံချပ်ကာယာဉ်ဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း လုပ် ကိုင်နေသူများထံမှ အကြံဉာဏ်တောင်းခံခဲ့သည်။ ငွေစက္ကူ ဒီဇိုင်းပုံစံသစ်အတွက် ပြည်သူလူထုကိုယ် စားလှယ်များက ဖြည့်စွက်အကြံပြုနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် တကယ်အရေးပါသည့် ရုက္ခဗေဒပညာရှင်များကိုတော့ မခေါ်မိခဲ့ပေ။
ဘဏ္ဍာရေး ချောက်ကမ်းပါး လက်တစ်လုံးအလို
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်စီးပွားရေး တုံ့ နှေးကျဆင်း(Recession)စေမည့် ပြင်းထန်ဆိုး ဝါးသော ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ဖြစ်ပေါ်လာ မည့် အခြေအနေကို "ဘဏ္ဍာရေးချောက်ကမ်း ပါး"(Fiscal cliff) ဟု အမည်ပေးထားကြသည်။ ယခုတော့ ထိုချောက်ထဲကျဖို့ လက်တစ်လုံးအလို မှာ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် က ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူလိုက်သည်။ သမ္မတ ဘုရှ်လက်ထက်က ချမှတ်ထားခဲ့သော အခွန်ဖြတ် တောက်လျှော့ချမှု အများအပြားကို ပယ်ဖျက်ရေး နှင့် အစိုးရအသုံးစရိတ် လျှော့ချရေး အစီအစဉ် များကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လအထိ ရွှေ့ဆိုင်းထား ရေးတို့ပါဝင်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ် ပေးခြင်းဖြစ်သည်။သမ္မတဘုရှ်လက်ထက်က အခွန်လျှော့ချမှု အားလုံးနီးပါးကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ဆိုသော် လည်း တစ်နှစ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၄၅၀ç၀၀၀ အထက် ရရှိသောအိမ်ထောင်စုများအပေါ် အခွန် ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်စည်းကြပ်မည်ဖြစ်၍ ပေး ဆောင်ရမည့်အခွန်နှုန်းမှာ ၃၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သွားသည်။ (ထိုနှုန်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ ပါ ဝင်သည့် OECD အဖွဲ့၏ စံနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် များသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။) ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ် ခဲ့စဉ်က တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ အထက်ရရှိသူများအပေါ် အခွန်တိုးမြှင့် ကောက်ခံ သွားမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သော သမ္မတအိုဘားမား၏ ကတိစကားကို အပြည့်အ၀ မဖြည့်ဆည်းနိုင်သော် လည်း ဝင်ငွေများများရသူတို့အပေါ် အခွန်တိုးမြှင့် ကောက်ခံနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ဆိုစေ အဆိုပါဝင်ငွေသတ် မှတ်ချက် နှစ်ရပ်အကြား ဝင် ငွေရရှိသူတို့အတွက် ခွင့်ပြုထားသည့် အခွန်ကင်း လွတ်ခွင့်၊ နုတ်ပယ်ခွင့်အချို့ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်း ဖြင့် ထိုသူတို့အပေါ်မှာလည်း အခွန်တိုးမြှင့်စည်း ကြပ်ရာ ရောက်စေပါလိမ့်မည်။ထို့ပြင် သမ္မတအိုဘားမားအနေဖြင့် အလုပ် လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်များကို နောက်ထပ်တစ်နှစ် ဆက်လက်ခံ စားခွင့် ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အိမ်ရာမြေ အမွေဆက်ခံမှုအပေါ်စည်းကြပ်သည့်အခွန်(Estate tax)၊ ကုမ္ပဏီ အမြတ်ဝေစု များ (Dividens) နှင့် အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေများ (Capital gains) အပေါ် စည်းကြပ်သည့်အခွန်နှုန်းများကိုမူ တိုးမြှင့် စည်းကြပ်ဦးမှာ မဟုတ်သော်လည်း ဝင်ငွေများပြား လျှင် ထိုအခွန်များလည်း မြင့်တက်လာမည်ဖြစ် သည်။ ဘဏ္ဍာရေးချောက်ကမ်းပါးမှ လွတ်မြောက် ရေးဥပဒေကြမ်းတွင် အမေရိကန် အလုပ်သမား များအပေါ် အခွန်တိုးမြင့်လာစေမည့် အချက်တစ် ရပ်လည်း ပါဝင်နေသည်။ စီးပွားရေးတွန်းအားပေး အစီအစဉ်အရ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကမှ ဆက်လက်ခွင့်ပြုထားသည့် လခစား အလုပ်သမား များအပေါ် စည်းကြပ်သည့်အခွန် (Payroll tax) မှ ယာယီခုနှိမ်ခွင့်သည်လည်း နိဂုံးချုပ်သွားတော့မှာ ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားများ ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်တွင် ၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာမည်ဖြစ်၍ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ပေးဆောင် ရတော့မှာဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေများများရသူတို့အပေါ် အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံခြင်းမှ အခွန်ရငွေ အတော် အသင့် တိုးတက်လာမှာဖြစ်သော်လည်း လုပ်ခ လစာအပေါ် ကောက်ခံသည့်အခွန်ကြောင့် အိမ် ထောင်စုသုံးစွဲနိုင် မည့်ဝင်ငွေ (Disposable in- come)ထဲမှ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံအထိ လျော့ နည်းသွားစေမှာဖြစ်သဖြင့် ပုဂ္ဂလိက ဝယ်ယူစား သုံးမှုကို အတော်အသင့်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးရရှိလာသည့် အခွန်စည်းကြပ်မှု ဆိုင်ရာအဆုံးအဖြတ်များသည် သမ္မတအိုဘားမား နှင့် ဒီမိုကရက်များ အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ရွေး ကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့ခြင်းကို ထင်ဟပ်နေသည့် အောင်ပွဲပင်ဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင် ယခုသဘော တူညီချက်များမှာ နောင်လာမည့် ဘဏ္ဍာရေးဆုံး ဖြတ်ချက်များအတွက် အခြေအနေကောင်းဦးမည့် အလားအလာတော့ မရှိပေ။ လာမည့် မတ်လတွင် အစိုးရအသုံးစရိတ် များ ဖြတ်တောက်လျှော့ ချရေး ပြဿနာ ကို ဆွေးနွေးရန် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က အချိန်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ လောလော ဆယ်တွင် ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်နှင့် ပြည်သူ လူထုသက်သာချောင်ချိရေးနှင့်မသက်ဆိုင်ေ သာ ပြည်တွင်းအသုံးစရိတ်များ ကို မတ်လမှစတင်၍ အကြီး အကျယ် ဖြတ်တောက်လျှော့ချရန် စီစဉ် ထားသည်။ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ရန် နောက် ဆုံးရက် သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည့် အခြားအစီ အစဉ်တစ်ရပ်လည်း ရှိနေသေးသည်။ ပြည်ထောင် စုအစိုးရက ချေးယူနိုင်ခွင့်ရှိသည့် ကြွေးမြီပမာဏ ကန့်သတ်ချက် (Debt ceiling) ကို တိုးမြှင့်သတ် မှတ်ပေးရမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်ကသာ တိုးမြှင့်မပေးခဲ့လျှင် အမေရိကန် အစိုးရသည် ဘဏ္ဍာရေးပညာအရ မိမိ၏ကြွေးမြီ များကို မပေးဆပ်နိုင်တော့သည့် ပျက်ကွက်သူ (Technical default) ဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။ လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီနှင့် မတ်လတို့တွင် ကြွေးမြီ ပမာဏကန့်သတ်ချက် တိုးမြှင့်ပေးရေး၊ ဘဏ္ဍာ ရေးချောက်ကမ်းပါးမှ လွတ်မြောက်ရေး အစီအစဉ် အရ အစိုးရအသုံး စရိတ်များ ဖြတ်တောက်လျှော့ချ ရေးနှင့် ဘတ်ဂျက်လိုအပ်ချက်အရ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအား ဘဏ္ဍာငွေ ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေး ရေးဟူသည့် ချမှတ်ရမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်သုံးရပ်တို့ ပေါင်းဆုံမိနေသည်။ ယင်းကြောင့်ပင် ဒီမိုကရက် နှင့် ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီကြီးနှစ်ခုအကြား အပြင်း အထန် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြရပါလိမ့်မည်။ထိုသို့ ထိပ်တိုက်ငြင်းခုံဆွေးနွေးရခြင်းကြောင့် အစိုးရ အသုံးစရိတ်များ ဖြတ်တောက်လျှော့ချရ မည့်သတ်မှတ်ရက်မှာ နောက်သို့ရွေ့သွားနိုင်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် စီးပွားရေးနာလန်ထူဖို့ အခွင့် အရေးကောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာ တွင် ရေတို ကာလအတွက် ဆေးမြီးတိုကုထုံး (Short-termism) ကို ကာလတာရှည်စွာပင် ဆက်လက် ကျင့်သုံးနေကြဦးမည့် လက္ခဏာဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Ref; The Economist.
အခြေခ့လစာ တိုးမြှင့်မှု နဲ့ ထိုင်း အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ယင်းလပ်ရှင်နာဝပ်ထရာ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ရာထူးလက်ခံပြီးနောက် အခြေခံလုပ်ခလစာကို တစ်ရက်ဘတ် ၃၀၀ နှုန်းနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ကစပြီးပေးဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်အတာနဲ့ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ကစပြီး အခြေခံလစာတွေကိုတိုးပေးလိုက်မယ် ဆိုရင် အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (SME) ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသူတွေက တစ်ရက်အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ ကို ဘတ် ၃၀၀ အထိ တိုးမြှင့်ပေးမယ်ဆိုရင် ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ရပါမယ်။ မဟုတ်ရင် လုပ်ငန်းတွေပိတ်သိမ်းရမဲ့ အခြေအနေရှိတယ်လို့ ထိုင်းဗဟိုဘဏ်အရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီအခက် အခဲက ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အလုပ်သမားရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို ၈ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ပေးဖို့လိုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အင်တာနက်အွန်လိုင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးတွင် စင်ကာပူသည် ကမ္ဘာတွင် အမြန်ဆုံး ထွန်းကားလာ သည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အာရှတွင် သာမက ကမ္ဘာနှင့်ချီပြောရလျှင်ပင် စင်ကာပူသည် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနှုန်း အများဆုံး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ယနေ့ စင် ကာပူနိုင်ငံတွင် အွန်လိုင်းရောင်းဝယ်မှု (e-commerce) စုစုပေါင်း၏ လေးပုံတစ်ပုံခန့်သည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှတ စ်ဆင့် ရောင်း ဝယ်ကြခြင်းဖြစ်၍ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့်ရောင်းဝယ်မှု (m-commerce) မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကြီးထွား လာသည်။ သို့ဖြစ်ရာ PayPal ကဲ့သို့ အွန်လိုင်းမှ ငွေပေးချေရှင်းလင်း သည့်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နေကြ သည့်ကုမ္ပဏီများအဖို့ စင်ကာပူသည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြု ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် နည်းပညာသစ်များ စမ်းသပ်သုံးစွဲရန် အသင့်တော် ဆုံးနေရာ ဖြစ်နေသည်။
ဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများ သာလွန်ကောင်းမွန်နေခြင်းအတွက် စင်ကာပူနိုင်ငံ ကလည်း ဂုဏ်ယူသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ် အောက်တို ဘာလတွင် ကြိုးမဲ့အင်တာနက်(Wireless broa- dband) အသုံးပြုနှုန်း ၁၆၂ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းသုံးစွဲနှုန်း ၁၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့သည်ဟု အစိုးရ ၏ ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မေလတွင် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများက ထုတ်ပြန် သော သုတေသနအစီရင်ခံစာ၌ စင်ကာပူနိုင်ငံ တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အင်တာနက်အွန်လိုင်း ဖြင့် ဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့သည့်ပမာဏမှာ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ သန်း ၁၄၀၀ (အမေရိကန် ဒေါ်လာဖြင့် သန်း ၁၁၀၀) ရှိခဲ့သဖြင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ကထက် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများလာသည်ဟု ဖော်ပြထား သည်။ အွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်သူဦးရေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာသဖြင့် ဝယ်ယူသူပေါင်း တစ်သန်းခွဲအထိ ဖြစ်လာသည်။လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ဖက်ရှင်အဝတ်အထည်၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု၊ အုပ်စုလိုက် အလည် အပတ်ခရီးစဉ်နှင့် စာအုပ်များသည် အွန်လိုင်းမှ အများဆုံးဝယ်ယူတတ်ကြသည့် အမျိုးအစား ၅ မျိုးဖြစ်သည်။ အိမ်အရောက်ပို့ စနစ်ဖြင့် လွယ်ကူ အဆင်ပြေစွာ ဝယ်ယူနိုင်သဖြင့် စားသောက်ကုန် အွန်လိုင်းဈေးကွက်သည်လည်း ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် တစ်နှစ်လုံးကထက် ၂၀၁၁ခုနှစ် ပထမ ၈ လအတွင်း အွန်လိုင်းဈေးကွက်တွင် စားသောက်ကုန်ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုပမာဏ သုံးဆအထိ တိုးလာသည်ဟု PayPal ကုမ္ပဏီ၏ စစ်တမ်းတွင် တွေ့ရသည်။ ဆန်၊ နို့မှုန့်၊ ကလေးအနှီးဘောင်းဘီ နှင့် အချိုရည်တို့ကဲ့သို့ များများစားစား ဝယ်ယူ လေ့ရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူသုံးစွဲမှုအပေါ် လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းဖြင့် လက်လီ ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းများသည်လည်း စူပါမား ကက်ကုန်တိုက်ကြီးများနည်းတူပင် အကျိုးအမြတ် ရရှိနေကြသည်ဟု ဆိုသည်။မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံးစွဲမှု ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့် အမျှ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုှု (m-commerce) သည်လည်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာဦး မည်သာဖြစ်သည်။ စင်ကာပူတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းအထိ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အရေအတွက် ၇ ဒသမ ၈ သန်းခန့်ရှိပြီး နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၉၀ ရာ ခိုင်နှုန်းသည် စမတ်ဖုန်း (Smartphone) ကို ကိုင်ဆောင်ကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းဖြင့် ရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်သည် စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၃၂၈ သန်းဖိုးအထိ အရောင်းအဝယ် ရှိခဲ့သဖြင့် ၆၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာ သည်မှာ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု သုတေသနစစ် တမ်းတွင် သုံးသပ်ဖော်ပြထားသည်။အင်တာနက်အွန်လိုင်းဖြင့် စုစုပေါင်း ဝယ်ယူ မှုပမာဏထဲတွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် ဝယ်ယူသည့် ပမာဏမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိ ခဲ့သော်လည်း လာမည့် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ၇၀ ရာ ခိုင်နှုန်းကျော်အထိ တိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟု ခန့် မှန်းထားသည်။ ကိုယ်နှင့်အတူ သယ်ဆောင်သွား နိုင်သောကိရိယာများ (Mobile devices)ကို အသုံးပြု၍ဈေးဝယ်ကြရာတွင် အများစု ၇၅ ရာခိုင် နှုန်းမှာ စမတ်ဖုန်းများမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင် ဈေးဝယ်သူတစ်ဦးချင်း ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုတွင် ကျောက်သင်ပုန်းကွန်ပျူတာ (Tablet) အသုံးပြုဝယ်ယူသူက ပျမ်းမျှ စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ၃၈၀ ဖိုးဝယ်ယူပြီး၊ စမတ်ဖုန်းဖြင့် ဝယ်သူ က ပျမ်းမျှ ၂၇၄ ဒေါ်လာဖိုးသာ ဝယ်ယူသည်ဟု ဆိုပါသည်။စင်ကာပူတွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှု မြန်ဆန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းေ ကြာင့် ဒေသတွ င်းနှင့်နိုင်ငံတကာတို့မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးအဝတ် အထည် လက်လီရောင်း သည့် Qoo10 ကုမ္ပဏီက အာရှ-ပစိဖိတ် ဒေသအတွင်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် ရောင်းရငွေပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၅ သန်းအနက် ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းသည် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ရောင်းရခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ Qoo10 ကုမ္ပဏီသည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မည့်အစီအစဉ် ဆော့ဖ်ဝဲ ကို လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က အင်တာနက်တွင်ထုတ်လွှင့် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေသတွင်းမှ ဆော့ဖ်ဝဲကူးယူသုံး စွဲသူ (Downloads) ၇၀၀၀၀၀ ရှိခဲ့ပြီး၊ ကူးယူသူ ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် စင်ကာပူနိုင်ငံမှဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် စင်ကာပူနိုင်ငံသူ အမျိုးသမီး ၅ ဦးလျှင် တစ်ဦးက ထိုဆော့ဖ်ဝဲကို ကူးယူသုံးစွဲခြင်းဖြစ်သည်။စင်ကာပူအစိုးရကလည်း မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် အားပေးသည်။ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းအသုံးပြုရာတွင် အထောက်အကူပြုမည့် ဆော့ဖ်ဝဲများ ရေးဆွဲထုတ် လုပ်ရာတွင် စံချိန်စံညွှန်း မီရေးအတွက် သက်ဆိုင် ရာအစိုးရဌာနက အကူအညီပေးသည်။ အွန်လိုင်း ငွေချေဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ PayPal ကလည်း အွန်လိုင်းဖြင့်ရောင်းချသူများ၏ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့်လည်း အဆင် ပြေစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် အစီအစဉ်သစ်များ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ပေးထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။Ref; The Economist.
အာဆီယံနှင့် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံတို့ အကြား ဆန်ကိစ္စ
ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု ခုခံကာကွယ်ရေးအတွက် စံပြုရမည့် အုလုမာဆန်သစ်တော REDD စီမံကိန်း
တရုတ်အာဆီယံ ကုန်သွယ်မှုဇုန်ကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြသလဲ
အင်တာနက်၊ မိုဘိုးလ်ဖုန်းနှင့် လယ်ယာဈေးကွက်
ဆန်ရောင်းဝယ်မှု မပါသော အာဆီယံ-ဂျပန် FTA
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပွားစေသော ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လွှတ်သည့် လောင်စာဆီများအပေါ် မှီခိုနေရမှုမှ လွတ်မြောက်ရေး
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အလုပ်လက်မဲ့ မြင့်မားစွာဖြင့် စီးပွားရေး အသင့်အတင့် ဦးမော့လာမှု
ဘဏ္ဍာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ စီးပွားရေး နာလန်ထူမှု တည်တံ့ရေးနဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်